तरकारीमा दैनिक बेसार प्रयोग गर्नुहुन्छ ? टंसिल भएमा बेसारको प्रयोग गर्नुहोस् - जानुहोस् यसका फाइदाबारे - ज्ञानविज्ञान
तरकारीमा दैनिक बेसार प्रयोग गर्नुहुन्छ ? टंसिल भएमा बेसारको प्रयोग गर्नुहोस् – जानुहोस् यसका फाइदाबारे
बेसारको औषधीय गुणलाई बुझेर नै सौन्दर्य प्रसाधनमा र औषधिको रूपमा पनि यसको प्रयोग प्रशस्त मात्रामा भएको पाइन्छ । बेसारलाई हलेदो पनि भनिन्छ । बेसार मसलाको रूपमा प्रयोग हुने वस्तु हो । यसको जरा खास गरि परिकारको रंग बदल्नको लागी प्रयोग गरिन्छ ।
हलेदोलाई नेपालको पश्चीमेली भाषामा हदेली, हदेलो अथवा बेसार भनिन्छ । हलेदोको रंग पहेंलो हुन्छ । त्यसैले हलेदोले परिकारको रंग पनि पहेंलो बनाउछ । हलेदोको विरुवा अलैंचीको विरुवा जत्रै हुन्छ ।
हलेदोको पात पनि ठुलो अलैंचीको पात जस्तै हुन्छ । हलेदोको जरा अदुवाको जरा जस्तै हुन्छ । हलेदो एक प्रकारको नगदे बाली पनि हो । यसको जराआयुर्वेदीक ओखती बनाउनमा पनि प्रयोग गरिन्छ। नेपालको अधिकांस भुभागमा हलेदोको खेती गरेको पाइन्छ ।
हरेक नेपालीको भान्सामा पाइने बेसार मानव स्वास्थ्यका लागि प्रकृतिको ‘वरदान’ हो । बेसार बहुउपयोगी औषधीय गुण भएको वनस्पति जसलाई आयुर्वेदमा औषधिका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
बेसारमा मानव शरीरका लागि आवश्यक पर्ने भिटामिन ए, भिटामिन बि, भिटामिन बि २, भिटामिन सि, क्याल्सियम, फस्फोरस, फलाम तत्व र क्यालोरी प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसमा पाइने कुरकुमिन नामक रसायनका कारण यसको रङ पहेँलो देखिन्छ ।
बेसार बहुउपयोगी औषधीय गुण भएको वनस्पति हो। सुन्निने समस्या भएको बेलामा यसको प्रयोग गरिन्छ। घुँडा सुन्निने तथा दुख्ने समस्यामा पनि बेसारको प्रयोग गरिन्छ।
धेरै पिसाब लागेमा
धेरै पटक पिसाब गरिरहनु पर्ने, पानीको प्यास बढी लाग्ने भएमा वा मधुमेह (डायबिटिज) भएमा पनि बिहान\_बेलुका १\_१ चम्चा शुद्ध राम्रो बेसारको धूलो पानीसँग खाने गरेमा १\_२ हप्तामै ठिक हुन्छ ।
राम्रो शुद्ध बेसारको धूलोलाई गाईको घ्यूमा मुछेर बेलुका सुत्ने बेला लगाउने गरेमा आँखा रातो भएको, घाउ भएको, जालो हुन लागेको धमिलो भएको आदि १\_२ हप्तामा निको गर्छ र सँधै लगाएमा आँखाको कहिल्यौ खराबी हुँदैन ।
१ चिम्टी खाने खयर, १ चिम्टी बेसार तातोपानीसँग विहान/वेलुका खाने गरेमा २/३ दिनमा नै सुख्खा खोकि ठिक हुन्छ ।
कुनैपनि घाउ, खटिरा वा काटेकोमा
राम्रो शुद्ध बेसारको धूलो ५० ग्राम २०० ग्राम तोरी वा तिलको तेलमा पकाउने, राम्ररी पाकेपछि छानेर सिसीमा हालेर राख्ने आवश्यकता अनुसार कुनै पनि घाउमा ,कान दुखेमा कानमा हालेर निको पार्न सकिन्छ ।
१ चम्चा घ्यू कुमारीको गुदी, १चम्चा राम्रो बेसार १ चिम्टी सिदेनून फिटेर तातो पानीसँग खाली पेट केही दिन खाएमा ठीक हुन्छ ।
शरीर सुनिएमा मर्केमा
५ ग्राम राम्रो शुद्ध बेसार दूधमा पकाएर बिहान बेलुका २\_४ दिन सेवन गर्नाले शरीरमा सुन्निएको साथै मर्केको पनि ठीक हुन्छ ।
बिहान\_बेलुका शुद्ध बेसार १ चम्चा खाने र घोटेर लेप बनाएर मनतातो पारी गलगाँडमा दिनदिनै लगाउने गरेमा ठीक हुन्छ तर धेरै पुरानो भए निको हुदैन ।
पेट फुल्ने रोग भएमा
हावा भरिएर पेट फुल्ने, दुख्ने, बटारिने भएमा १ चम्चा बेसार र १ चम्चा नून १ गिलास पानीमा पकाएर बिहान\_बेलुका खानाले ठिक हुन्छ ।
कफ जमेर दम हुनेमा
आधा चम्चा बेसार दिनको ३ पटक मनतातो पानीसँग खाएमा कफ जमेर हुने कफ ठिक हुन्छ ।
रुघा लागेमा, सर्दि भएमा
ज्वानो र बेसार १ चम्चा दिनको ३ पल्ट १ गिलास पानीमा पकाएर खाएमा यसले रुघा पाक्छ र चाँडै आराम हुन्छ ।
मूख, घाँटीमा घाउ आएमा
२ चम्चा बेसार २ गिलास पानीमा पकाउने र १ गिलास भएपछि गारगल\_कुल्ला दिनको २ पटक गरेमा ठीक हुन्छ ।
१ गिलास दूधमा १ चम्चा बेसार हालेर उमालेर दिनको २ पल्ट खाएमा ठिक हुन्छ। बेसारको टुक्रा पोलेर सुत्ने बेला चुस्ने गरेमा पनि खोकी ठिक हुन्छ ।
टंसिल दुखेकोमा बेसार र मह फिटेर रुद्रघण्टीमा बेलुका सुत्ने बेलामा लगाउने गरेमा ठीक हुँदै जान्छ ।
हात्ती पाइले रोगमा
गौत(गाईको पिसाब) आधा गिलास, १ चम्चा बेसार, १ चम्चा सखर हालेर नित्य बिहान\_बेलुका खाने गरेमा हात्तीपाइले रोग ठीक हुँदै जान्छ ।
घ्यू कुमारीको गुदीमा राम्रो बेसार फिटेर मनतातो पारी आखाँमा राती सुत्ने बेलामा बाँध्नाले आँखाको सम्पूर्ण रोग निको हुन्छ ।
घ्यू कुमारीको गुदी नित्य बिहान/बेलुका एक/एक चम्चा खाने गरेमा वाथरोग ठीक हुन्छ । मर्केको, चोट लागेको र सुनिएकोमा घ्यू कुमारीको गुदीमा बेसार मिसाउने र तताएर बाँधिदिएमा छिटै दुख्न कम हुन्छ, चोट पनि ठिक हुन्छ ।
दाँत बलियो बनाउन
रायोको तेलमा नून बेसार मिलाएर नित्य सुत्ने बेलामा औंलाले दाँत राम्ररी माझेर मनतातो पानीमा कुल्ला गर्ने गरेमा १/२ हप्तामा नै गिजा तथा दाँत जरैदेखि बलियो हुन्छ ।
अनुहार सुख्खा भएमा
मेथीको धूलो, बेसार, नीमपातको मिश्रण पानीमा रगडेर बिहान/बेलुका अनुहारमा लगाउने गरेमा डण्डीफोर, चायाँ, दाग, दाद बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छ ।
मर्केको, चोट लागेको र सुनिएकोमा
घ्यू कुमारीको गुदीमा बेसार मिसाउने र तताएर बाँधिदिएमा छिटै दुख्न कम हुन्छ, चोट पनि ठिक हुन्छ ।
बेसारको प्रयोग र खाने बिधि :
– दूधमा बेसार हालेर दैनिक खाँदा रुघा-खोकी तथा चिसोले सताउँदैन भने आन्तरिक घाउ पनि ठीक हुन्छ ।
– ईएनटी अर्थात् नाक, कान, घाँटीको समस्या हुनेहरूका लागि ज्यादै उपयोगी छ बेसार । परम्परागत रूपमै हामीले यसको प्रयोग गर्दै आएका छौं ।
– छातीमा कफ जमेको छ, खोकी लागेको छ भने दुई दाना मरिच, एक चिम्टी बेसार घिउमा मिसाएर बनाइएको लेपले छातीमा हल्का मालिस गर्दा फाइदा हुन्छ ।
– पुरानो खोकी (सुख्खा होस वा अन्य) भने को टुक्रा चुस्ने । राति पनि बेसारको टुक्रा मुखमा राखेर सुत्ने ।
– बेसारको सेवनले रगत शुद्ध बनाउँछ ।
– पिलो तथा घाउमा बेसार लगाउँदा फाइदा हुन्छ ।
– बेसार एन्टिबायोटिक पनि हो । आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा दिइने एन्टिबायोटिकले मित्र जीवहरूलाई पनि नष्ट गर्छ, तर बेसारले शत्रु जीवलाई मात्र नष्ट गर्छ ।
– सौन्दर्य प्रशाधनमा पनि बेसार प्रयोग हुन्छ । बेसार, चनाको बेसन तथा तोरीको तेल एक साथ प्रयोग गर्ने हो भने अझ राम्रो हुन्छ ।
– बेसारमा भएको तैलीय पदार्थ शरीरले सहजै ग्रहण गर्छ र शरीर सुन्दर देखिन्छ ।
– जन्डिसमा २-३ ग्राम बेसार मोहीका साथ खाँदा फाइदा पुग्छ ।
– बेसारमा मानव शरीरलाई स्वस्थ तथा सुदृढ बनाउन आवश्यक सबै गुण विद्यमान छ ।
दुधमा बेसार मिसाएर खादाको फाईदा :
१.दैनिकरुपमा एक गिलास दुधमा आधा चम्चा बेसार मिसाएर खाँदा प्रयाप्त मात्रामा क्याल्सियम प्राप्त हुन्छ । जसका कारण गर्दा हड्डी स्वस्थ तथा मजबुत हुन्छ ।
२.बेसार र दुध मिसाएर खाँदा शरीरका जोर्नी दुख्ने समस्या पनि हट्छ । यसबाहेक बाथरोगका कारण हुने सुजनलाई पनि कम गर्दछ ।
३.दुध र बेसारको प्रयोगले हाम्रो शरीरमा भएका हानिकारक तत्व बाहिर निस्कन्छन् । विशेषगरी रगतमा भएको हानिकारक तत्व तथा कलेजोलाई सफा राख्न बेसार र दुधले सहयोग गर्दछ ।
४. बेसार हालेको दुध खाने हो भने क्यान्सरका कारण मानव कोषमा भएको डिएनएमा पर्ने असर वा हानीलाई रोक्दछ भन्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । यस बाहेक क्यान्सर उपचारमा प्रयोग गरिने केमोथेरापी प्रविधिको साइड इफेक्टलाई कम गर्दछ ।
५. दुध र बेसार सेवनले कान दुख्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ । शरीरमा रक्त सञ्चारलाई बढाएर कान दुख्ने पीडा कम हुने गर्दछ ।
८. दैनिक एक गिलास दुधमा आधा चम्मा बेसार मिलाएर पिउने हो भने शरीरमा भएको अनावश्यक बोशो कम हुन्छ । यस कारण मोटोपन घटाउन पनि बेसार र दुध प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
९. छालासम्बन्धी विभिन्न समस्याबाट छुटकारा पाउनका लागि बेसार हालेको दुध उपयोगी मानिन्छ ।
१०. दुध र बेसार मिलाएर सेवन गर्ने हो भने पेटसम्बन्धी विभिन्न रोग निको हुन्छन् । पखला लाग्ने, पेट दुख्ने, ग्याष्ट्रिक तथा अल्सर जस्ता समस्याबाट पीडित बिरामीलाई बेसार अमृत समान मानिन्छ ।
११. महिनावारी भएको बेलामा पेट दुख्ने समस्याबाट मुक्त हुन बेसार र दुध प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै गर्भवती अवस्थामा रगत बग्ने समस्यालाई पनि कम गर्दछ । सुत्केरी भएपछि सामान्य अवस्थामा छीटो फर्कन पनि दुध तथा बेसारले सहयोग गर्द छ ।
थप जानकारी :
सबैले खानाका अधिकांश परिकारहरुमा बेसारको अनिवार्य प्रयोग गरेकै हुन्छन् । बेसार प्रयोग नगरिएको परिकार देख्दा नै खान मन लाग्ने पनि हुन्छन् । परिकारलाई राम्रो देखाउन मात्र नभएर बेसारका कैयौँ फाइदा छन् ।
कतिपय रोग त बेसारकै सेवनले पनि निको हुन्छन् । बेसारले एन्टिबायोटिकको काम गर्छ तर धेरै खाएमा र सधैं खाँदा यसले गम्भीर असर समेत पार्छ । बेसारको प्रयोग सधै र ठिक मात्रमा सेवन नभए निःसन्तानको खतरा बढाउँछन्। बेसार कस्तो अवस्थामा र कति प्रयोग गर्ने भन्नेबारे जान्न जरुरी छ ।
गर्भावस्था : गर्भावस्था या शिशु जन्मिसकेपछिको अवस्थामा बेसारको प्रयोग महिलाका लागि हानिकारक हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा बेसार खाँदा महिनावरी रोकिने र प्रजनन् प्रणालीमा गडबढी निम्त्याउछ । बेसारले गर्भाशयलाई उत्तेजित या सक्रिय पार्न भूमिका खेल्छ । बेसारले टेस्टोस्टेरोन हर्मोन कम गर्न पनि सहायक भूमिका खेल्छ ।
शुक्रकिट : खानामा अधिक बेसार प्रयोग गर्दा पुरुषको शुक्रकिटमा ह्रास आउँछ । परिवारको योजना बनाइरहेकाहरूले खानाका परिकारमा बेसारको प्रयोग धेरै नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । खानामा बेसार बढी हुँदै गएमा पुरुषको शुक्रकिटमा ह्रास अाउँदा
अप्रेसनपछि : शरीरमा कुनै प्रकारको अप्रेसन गरिएको अवस्था छ भने खानामा बेसारको मात्रा पूरै बन्द गरिदिए राम्रो हुन्छ । बेसारले रगत जम्न दिँदैन । अप्रेसनपछि पनि बेसार खाइरहे घाउबाट रगत बगिरहनसक्छ ।
पत्थरी : पित्ताशयमा पत्थरी भएका वेला बेसार सेवन गर्दा पीडा हुन्छ । पित्ताशयको पत्थरी भएकाले खानामा बेसार कम गर्दा पीडा कम गर्न सकिन्छ ।
Don't Miss it फोक्सो सम्बन्धी बिरामीको लागि तामा अमृतसमान हुन्छ, जान्नुहोस् यसका फाइदाबारे – पढेर शेयर गर्नुहोला
Up Next किन पच्दैन खाना ? अपचले निम्त्याउने केहि रोगबारे जानिराखाैँ
अंगुरलाई सुकाएर किशमिश बनाइन्छ । यसमा आइरन, पोटाशियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फाइबरको पार्याप्त मात्रा हुन्छ । यसकारण यसलाई स्वास्थ्यका लागि…
आपतकालिन उपचारमा प्रयोग हुने ११ जडिबुटी – भान्सामै छन् यी औषधिहरु
हामी जुनसुकै बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छौं। तर कतिपय अवस्थामा तत्कालै चिकित्सकहाँ जान असम्भव पनि हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रोवरिपरि पाइने…
मानव जीवनका लागि अमृत बुटी: गहुँको जमराको जुस
अध्ययनले गहुँको जुसमा अत्याधिक औषधीय तत्व हुने गरेको पत्ता लागेको छ । यसलाई सजिलै बनाउन सकिन्छ, धेरै खर्च पनि लाग्दैन,…
कालो मरिचको सेवनले क्यान्सर बाट छुटकारा – यस्ता छन् अचम्मका फाईदा
‘मरिच’ एक खाद्य पदार्थ हो। यसको रङ्ग कालो हुन्छ। यसलाई दुध, चिया, रोटी, तरकारी आदिमा प्रयोग गरिन्छ । वनस्पति जगत्‌मा…
भगवान कृष्णले पाण्डवकै पक्ष किन लिए ? किन युद्दमा कृष्णले हतियार उठाएनन् ?
महाभारतको युद्ध सुरु हुनु अघि अर्जुन र दुर्योधन दुवै कृष्णलाई भेट्न गएका थिए। दुवैको उद्धेश्य कृष्णलाई आफ्नो पक्षमा सामेल गर्ने…
काक्रो अचारमा यति थोरै कुरा याद गर्ने हो भने अचम्मै मिठो बन्ने रहेछ – भिडियो सहित
हामी नेपालीको खाना बिछट्टै राम्रो किसिमको छ । दाल, भात, तरकारी र त्यसमा जिब्रोबाट पानी आउँने अचार । यति मिलेको…
खोकीवाट वाच्नको लागी केहि घरेलु उपाय, यस्ता छन्
अदुवा हालेको चिया खाने सुक्खा खोकी लागेको बेला अदुवा मिसाएको चिया खाने गर्नाले आराम मिल्छ । अग्लो सिरानी हाल्ने सुक्खा…
भगवान रामको मृत्यु यसरी भएको थियो, थाहापाउनुहोस्
रामायणबारे सामान्य जानकारी राख्नेलाई पनि थाहा होला कि भगवान रामको जन्म आधुनिक भारतमा पर्ने अयोध्या शहरका राजा दशरथको घरमा जेष्ठ…
गाँजर र करेला सेवन गर्नुका छन् यस्ता फाइदै फाइदा
गाँजर गाँजर खानाले फोक्सो, स्तन तथा कोलोन क्यान्सर लाग्नबाट बचाउछ । गाँजरमा भएको पोलि–अक्टिलाइन एन्टिअक्सिडेन्ट र फाल्कारिनोल भन्ने तत्वका कारण…
भनिन्छ ३ वटा सुन्तलामा भन्दा १ वटा अमलामा धेरै भिटामिन हुन्छ जान्नुहोस् फाइदाहरु
अमला अति स्वस्थकर फल हो । अमला खाँदा अमिलो र टर्रो भए पनि खाएको एकैछिनमा मुखमा मिठो स्वाद उत्पन्न हुन्छ…
मधुमेह बिरामीले तल उल्लेखित काम गर्न सकिन्छ
व्यायामः व्यायमसहितको स्वस्थ जीवनशैलीले तपाईंलाई मधुमेहबाट बचाउन सहयोग गर्छ । व्यायामले तपाईंलाई मधुमेहलगायत विभिन्न रोगबाट टाढा राख्छ । तपाईंले आफ्नो…